Dadaal lagu midaynayo Qubrus oo Switzerland ka billawday - BBC News Somali
Dadaal lagu midaynayo Qubrus oo Switzerland ka billawday
Wadahadallo ujeeddadoodu tahay dib u mideynta Jasiiradda kala qaybsan ee Qubrus ayaa ka billowday wadanka Switzerland, iyadoo ay garhayeen ka tahay Qaramada Midoobay.
Wadahadaladda ayaa la filayaa inay socdaan saddex maalmood waxaana ka qayb galaya hogaamiyaha Giriigga Qubrus iyo kuwa bulshada Turkiga Qubrus,iyo sidoo kale wasiiradda arrimaha dibadda Giriiga, Turkiga iyo Britain.
Dhamaan dhinacyada muhiimka u ah qorshahan ayaa waxay doonayaaan in la mideeyo Qubrusta kala qaybsan dhamaantoodna kulanka ayay ku dhan yihiin, waxaa kaloo goob joog ka ah kulankan diblumaasiyiin ka socota Qaramada Midoobay, iyo Midowga Yurub.
Waxaa jira heshiis laga gaaray meelaha qaar, sida awood wadaaga iyo xuquuqda dhulka, laakiin arrinka ugu adag ee is mariwaagu ka taagan yahay waa dhanka ammaanka kaasi oo taagnaan doona illaa iyo dhamaadka.
Turkiga waxaa ka jooga waqooyiga Qubrus 35,000 oo ciidammo ah, iyadoo Giriigu uu qabo in aanay door ku lahayn ciidankaas dib u mideynta ka dib, laakiin Turkigu wuxuu doonayaa in ciidamadaas joogaan.
Dublamaasiyiin caalami ah oo ka qaybgalaya wadahadalka Qubrus
Turkiga oo basaasay mucaarad Jarmalka jooga
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in ay jirto fursad dhab ah oo heshiis lagu gaaro, laakin waxay ku bixisay digniin inaanay ahayn mid la isku halayn karo, isla markaana maalmaha soo socda ay yihiin kuwa adag.
Jasiirada Qubrus ayaa kala qaybsantay sannadkii 1974 markaas oo Turkigu guluf weerar uu ku qaaday wuxuuna geeyey ciidammo kumannaan kun ah.
28 Maajo 2022
Maxaad kala socota qaabka loo beero gacmaha marka ay qofka ka go'aan?